Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Barashada Bandhigga Hore ee Bilaashka ah ee IMEX America
Dhakhtar ku takhasusay cilmiga maskaxda ee Harvard, hoggaamiyeyaasha joogtaynta caalamiga ah, horyaal naqshadeynta dhacdooyinka, khabiir dabeecadda aadanaha, iyo sahamiye cidla ah oo aan dhammaad lahayn ayaa dhammaantood hoggaaminaya barashada Smart Monday, oo ay maamusho MPI.
Cusub ee 2021 waa taxane ah "Headliners," dhammaan dadka ku hadla goobahooda.
Barashada bandhigga ka hor waxaa ka mid ah Kulanka Kulanka Fulinta, Ururka Hoggaaminta Ururka, iyo Me Means Business.
Kalfadhiyo go'an oo loogu talagalay kooxaha warshadaha kala duwan ayaa u oggolaanaya ka -qaybgalayaashu inay shaqsiyeeyaan waayo -aragnimadooda Smart Isniinta.
Waxaa jira ajande diiradda la saarayo mustaqbalka oo loogu talagalay Smart Isniin-maalin lacag la'aan ah, oo buuxa oo wax-barashada Nofeembar 8, oo dhici doonta ka hor inta IMEX America aysan ka bilaaban Nofeembar 9-11 Mandalay Bay, Las Vegas.
Dhakhtar, qoraa iyo ganacsade bulsheed oo caalami ah, Dr. Shimi Kang, ayaa bilaabaya maalinta xoogga badan. Borofisar Iskuduwaha Caafimaadka ah oo ka tirsan Jaamacadda British Columbia, Dr. Kang ayaa bixin doona Muhiimadda Isniinta Smart. Aniga ahaan, meesha ugu xiisaha badan ee sayniska iyo mawduuca shaqada noloshayda waa neerfaha aadanaha - barashada cidda aan nahay iyo sababta aan u dareenno oo u dhaqano sida aan sameyno. Sayniska, waxaan ka helnaa jawaabo badan iyo sidoo kale dhiirrigelin si aan ugu sii gudubno baadi -goobkeenna aqoonta, ”ayay tidhi. Bixinta barashadii ugu dambeysay ee neerfaha caafimaadka maskaxda, adkeysiga, hoggaaminta iyo wax-qabadka, Dr Kang wuxuu bixin doonaa "rijeetooyin" ku saleysan cilmi-baaris oo si dhaqso leh loogu dalban karo caafimaad wanaagsan, kalgacal iyo ujeedo.
Dr. Shimi Kang, dhakhtar, qoraa iyo ganacsade bulsheed oo caalami ah.
Madaxdii ugu saraysay biilka
Cusub ee 2021 waa taxane ah 'Headliners', dhammaan kuwa ku hadla goobahooda. Waxay hogaaminayaan barnaamij balaaran oo ah barashada horudhac ah oo ay kujiraan sidoo kale Madasha Kulanka Fulinta, Madasha Hogaaminta Ururka iyo Me Means Business, oo ah dhacdo wadajir ah IMEX iyo majalada TW, oo ay taageerto MPI.
• Janet Sperstad, Agaasimaha Kulliyadda Kulliyadda Madison iyo Guy Bigwood, Agaasimaha Maareynta Dhaqdhaqaaqa Joogtaynta Meelaha Caalamka ayaa si wadajir ah u hoggaamin doona kulan: Mustaqbalka waxaan rabnaa: Kicinta kacaanka dib -u -soo -nooleynta. Tani waxay ku dhisnaan doontaa IMEX cilmi waxay isla qoreen kaas oo daboolay dabeecadda booska iyo sida loogu daro mabaadi'da dhaqaalaha wareegsan qaabaynta dhacdada.
• Ruud Janssen iyo Roel Frissen oo aasaasay Collective Design Event waxay muddo dheer fiirinayaan naqshadaynta dhacdada. Kalfadhigooda, DESIGN ISBADALKA - Kor u qaadista awoodahaaga si aad u eegto oo aad wax uga qabato wixii ka dambeeya hadda, waxay soo saari doonaan baaq ku aaddan hubka si ay u qaataan aragti mustaqbalka diiradda lagu saarayo.
• Maxaa dhacaya haddii qorsheeyayaasha dhacdooyinka ay ka leexdaan tirakoobka dadka oo ay qaataan qiyamka asaasiga ah ee aadanaha si ay u abuuraan dhacdooyin dhab ah oo awood leh? Tani waa su'aasha uu weydiiyay David Allison oo ah aasaasaha Valuegraphics. Xog-ururintiisii ​​caalamiga ahayd ee burburtay waxay muujineysaa sababta ay u tahay qiimahayaga-ma aha tirakoobka dadka-oo horseeda oo saameeya dhaqanka iyo go'aan-qaadashada. Dhageyso wareysiga IMEX Podcast ee David halkan.
• Xarunta ugu dambaysa ee Headliner -ka ayaa ka -qaybgalayaashu safar ku tegi doontaa cidlada. Daniel Fox, sahamiyaha, sawirqaadaha dabeecadda, xiisaha duurjoogta iyo qoraaga ayaa la wadaagaya waayo-aragnimadiisa meel-ka-baxsan Xeerarka FOX: Waxa aan waqtigaygii cidlada ku baray sida loo maareeyo khataraha, hubin la'aanta, isbeddelka iyo sida loo dabaqo casharradaas si loogu noolaado nolol aad u badan.